YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, January 18
ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က Sedona Hotel မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပြေတီဦး နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ စုလျားရစ်ပတ် လက်ထပ်ထိမ်းမြား မင်္ဂလာပွဲ - MRTV4 မှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/18/20110အကြံပြုခြင်း
391K View Download
north to myanmar.pdf
18 Jan 2011 Yeyintnge's Diary.doc
1965K View Download
18 Jan 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
3025K View Download
18 Jan 2011 Yeyintnge's Diary
Anti-Conscription Manifesto ( စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ ဆန့်ကျင်ရေး ကြေညာစာတန်း )
by San Maung on Tuesday, January 18, 2011 at 5:18pm
ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေ/conscription ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ကြေညာစာတန်းနှစ်စောင်ထုတ်ဖူးတယ်
တစ်စောင်က ၁၉၂၆က ထုတ်တာပါ Anti-Conscription Manifesto 1926 လို့လူသိများတယ် . . . ဒီကြေညာစာတန်းကို အိုင်စတိုင်း၊ ဘာထရန်ရပ်ဆဲလ်၊ ဂန္ဒီ၊ ရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုး၊ ပြင်သစ်စာရေးဆရာဟင်နရီဘာဘူဆေး၊ အိတ်ဂျီဝဲလ်၊ အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာ အက်ဒွပ်ကာပင်တာ စတဲ့ ထိပ်သီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ . . .
နောက်တစ်စောင်ကိုတော့ ၁၉၃၀ မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်. . . ဒီတစ်ခါတော့
Against Conscription and the Military Training of Youth 1930 ဆိုပြီးထုတ်ပြန်တာပါ . . . ဒီတစ်ခါတော့ ဘာထရန်ရပ်ဆဲလ်၊ အိတ်ဂျီဝဲလ်၊ ရာဘင်ဒြာနတ်တဂိုး၊ အပ်တန်ဆင်ကလဲယား၊ ဒသနဆရာဂျွန်ဒီဝေး၊ ဆစ်ဂမန်ဖရိုက်၊ သောမတ်စ်မန်းစတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါဝင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြ ပါတယ်။
ဒီကြေညာချက်နှစ်စောင်ကို အခြေခံပြီး Gandhi Information Center ကနေ Manifesto Against Conscription and the Military System ဆိုတာကိုထပ်မံထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ် . . .
ဒီထဲက စစ်၊ စစ်မှုထမ်းစနစ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အတော်လေးအလင်းပွင့်စေနိုင်တဲ့ ရေးသားချက်လေးတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ တစ်ချို့ကိုထုတ်နှုတ်ပြချင်တယ်။
- စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဆိုတာ လွတ်လပ်မှုကိုဖျက်ဆီးပစ်တာ လူ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို သိက္ခာချပစ်လိုက်တာပဲ။ စစ်တန်းလျားထဲကဘ၀၊ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၊ တရားမဲ့ ရူးမိုက်တဲ့ အမိန့်တွေကို မျက်စိမှိတ်လိုက်နာရမှု၊ လူသတ်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေ့ကျင့်နေရမှုတွေဟာ တစ်သီးပုဂ္ဂလလူသား၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူသားဘ၀တွေကို လုံးဝအလေးမထားတာ၊ မစဉ်းစားတာပါပဲ။
- လူသားတွေကို သူတို့ဆန္ဒမပါဘဲ၊ ယုံကြည်ချက်မရှိဘဲ အတင်းအကျပ် သေခိုင်းသတ်ခိုင်းတာဟာ လူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို အဆင့်ချပစ်လိုက်တာပါ။
- နိုင်ငံတော်/State အနေနဲ့ သူ့မှာ သူ့နိုင်ငံသားတွေကို အတင်းအကျပ်စစ်တိုက်ခိုင်းနိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ထင်နေရင်တော့ ဒါဟာငြိမ်းချမ်း တဲ့ ဘ၀တွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့တန်ဖိုးကို လုံးဝလေးစားမှုမရှိတာပါပဲ . . .
- နောက်ပြီး စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာ စိတ်ကိုပုံသွင်းရလွယ်တဲ့အရွယ်မှာ ပုရိသအမျိုးသားထုကြီးတစ်ရပ်လုံးကို ရန်လိုတဲ့စစ်သွေးကြွစိတ် သွင်းပေးလိုက်တာပါပဲ
( မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေပါပါမယ်လို့ဆိုတယ်)
- စစ်ပွဲအတွက်လေ့ကျင့်ပေးတာဟာ လူတွေကို စစ်ပွဲဆိုတာ ရှောင်လွှဲလို့မရဘူး လို့မြင်လာအောင် လုပ်ပေး လိုက်တာဖြစ်သလို စစ်အပေါ် ဆန္ဒတိမ်းညွတ်မှုတွေကိုတောင်ဖြစ် လာစေပါတယ်။
- စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေပြဌာန်းတာဟာ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တွေကို စစ်ဝါဒအောက် အတင်းအကြပ် သွတ်သွင်း လိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်
- နောက်ပြီး ဒါဟာလူကိုကျွန်ပြုတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်။
- စစ်ရေးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာဟာ လူသတ်တဲ့ပညာကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ သင်ကြားပို့ချပေးတာပဲ။ စစ်ရေးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာဟာ စစ်ပညာသင်ပေးတာပဲ။ စစ်သွေးကြွစိတ်ကို အမြဲရှင်သန်နေအောင်လုပ်ပေးတာပဲ။ ငြိမ်းချမ်းလိုစိတ်ဖြစ်ထွန်းလာမှုကို ဟန့်တားလိုက်တာပဲ . . .
- ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ လူတွေကို ဒီစစ်ကျွန်ပြုစနစ်ကနေလွတ်အောင်ရုန်းဖို့ တိုက်တွန်းအားပေးတယ်။ ဒါကြောင့်လွတ်အောင်ရုန်းမယ်ဆိုရင် ဂန္ဒီတို့၊ မာတင်လူသာတို့ရဲ့ အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်တဲ့လမ်းစဉ်ကို သုံးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းလိုတယ်. . .
ဲ့- ဒီခေတ်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်တွေ၊ ကျွန်ုပ်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို စစ်ရိပ်စစ်ငွေ့တွေဖယ်ရှားအောင်လုပ်ရမယ့် အချိန်ကာလအခါသမယကြီးပဲ၊ စစ်နဲ့ စစ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုရဲရဲရင့်ရင့် ဆန့်ကျင်ရမယ့် အခါသမယကြီးပဲ။
# ကြေညာစာတန်း အပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ ထုတ်နုတ်ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ မူရင်းကတော့ Manifesto Against Conscription and the Military System ဆိုတာပါ။ ကျွန်တော့်အာဘော်တွေမဟုတ်ပါဘူး။
# ကျွန်တော်ကတော့ (တကယ်လို့ စစ်မှုထမ်းဥပဒေသာအတည်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်) ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုယ်ပိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ဒီကြေညာစာတန်းကို ရဲရဲရင့်ရင့် ကိုင်စွဲထားသင့်တယ်လို့မြင်ပါကြောင်း . . . .
Peace it comes not fromagun, it is an inner call
To have and hold from this day forth, it is within us all
For freedom too, it's the result of such sweet inner peace
Let's takeahold and be so bold, it's time for such release
The dove, the symbol of that love and peace for us to be
It's gentleness of hope and joy flies in our sanctuary
This sanctuary the sacred place with gentle flame of light
Within ourselves this flame of hope is ever burning bright
Let's shine our light of peace and joy forever to mankind
The truth that sets us free from all the chaos let us find
Let's end the past of war and hate and join the march of love
Tis onward, upward, t'wards the light that's shining from above
To light the way to bring us all to one in harmony
With olive branch and love for all there's peace so let it be
The peace which passes understanding now is understood
Experienced by everyone who wishes that it could
So let the dove of peace break out from all our sanctuaries
Let's flood the world with suchalove beyond the birds and bees
Freedom then and trust and joy will be no longer hidden
The world will be at One at last no longer to be bidden
So let's create the perfect world,aparadise at best
So let it be, let's celebrate for it will manifest
O Peace, O Peace what joy you bring when all begin to laugh
To see the joke we've lived each day, believed on your behalf
The gun is gone, the wars are o'er, for peace is now prevailing
The world is one at last, at last, it is no longer ailing
So peace is our's, now it's time - no longer to pretend
Elizabeth A Feisst
နေ၀င်းမောင်အမေးအမေစုအဖြေ(နအဖရဲ့ သဘောထားအချို့ တွေ့ရှိရ)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/18/20112အကြံပြုခြင်း
အင်းစိန်ထောင်တွင် ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်မောင်ဝင်း ၂၁ နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အမေစုအားပေး
DKBA ထံ ရောက်ရှိလာတဲ့ နအဖ ကလေးစစ်သား (၂) ဦး(အပိုင်း၁-၄)
north to myanmar
ညွန့် ပေါင်းသတင်းလွှာ (NCGUB) JAN 2011
Attachment(s) from NCG Border Office
Voice of Burma Information Group Issue No.797 Jan 16
Sanction ကိစ္စလေ့လာရန် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ ရန်ကုန်မြို့သို့ သွားရောက်
Burma Today News Update (January 17, 2011)
[Attachment(s) from Burma Today included below]
Unfortunately, we have not been sent the e-mail updates news since December 27, 2010. Burma Today is mostly self-funding online Burmese language news website and our dedicated editors, reporters, citizen journalists, and supporters are voluntarily contribute their time, commitment, and effort to Burma Today. We thank to our team members for their contribution and the audience as well. We truly apologize that we can’t update our e-mail news distribution for3weeks and we will try our best in the future.
Scientists Unveiled California Super Storm Scenario (Myint Hlaing) News Report – January 17, 2010
ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် လွန်စွာ ပြင်းထန်တဲ့ မုန်တိုင်းကြီး ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေများ ဖြစ်ထွန်း နေ
Mother Day Poetry Event in Korea (Zaw Moe Aung) Photo News
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပတဲ့ အမေနေ့
South Korea – Burma related news (Zaw Moe Aung) New Report
တောင်ကိုရီးယား၊ မြန်မာဆိုင်ရာ သတင်းများ
Wedding Ceremony of Pyi Ti Oo and Eindra Kyaw Zin (Myanmar Celebrity Video)
ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်
Karen New Year Festival in South Carolina (Day Day Wah) Photo News
တောင်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ် ကိုလံဘီယာမြို့က ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲ
Sociology Class, Sham Monk, and Relaxing Exercise (You Tube Video)
No. 1 စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းနဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ထားသူတဦးရဲ့ အဆိပ်ထုတ်နည်း
Buddha Puja (Kyaw Thu) Photo Essay
Director Maung Wanna Funeral Service (Demo Waiyan) Photo News
ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီမောင်ဝဏ္ဏ ဈာပန - အမှတ်တရ
Maung Wanna Funeral Service (Kyaw Thu) Photo Essay
The Last Journey of Maung Wanna (Kyaw Thu) Photo Essay
ပကာသန မဖက်ဘဲ သဘာဝအတိုင်းသွားချင်သူ ကိုဝဏ္ဏ
Paul Grove Visits HIV/AIDS Center in Rangoon (Demo Waiyan) Photo News
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဝေဒနာရှင်များအား အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့မှ သွားရောက် ကြည့်ရှု
Social Music Network (Kyaw Thu) Photo Essay
Activities of the Best Friends Library (Demo Waiyan) Photo News
မဲဆောက်မြို့ မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက် စကားပြောစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကဖေး ဆိုင်ဖွင့်ပွဲ
Karen New Year Festival in Thai-Burma Border (Ahshaygyi) Photo News
ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ်က ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်
Karen New Year Celebration in North Carolina (Tin Aung Moe) Photo News
Burma Today Exclusive Interview with Yebaw Khin Kyaw (ABSDF)
ကျောင်းသားတပ်မတော် စစ်ရေးတာဝန်ခံ ရဲဘော်ခင်ကျော်နဲ့ စကားပြောခြင်း
Happy New Year 2011 Song by Mar Mar Aye
အဆိုတော်ကြီး ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်သစ်သီချင်း
Japanese Man Donate 200 Years Old Buddha Statue to Burmese Monk (Aye Nandar Aung) News Report
ဂျပန်လူမျိုးတဦးက မြန်မာပြည်သူများထံ ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တဆူ လှူဒါန်း
Photo News from Rangoon (January 4, 2010)
ရန်ကုန်မြို့က ဓါတ်ပုံသတင်းများ (ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့) ဒီမိုဝေယံ၊ မြတ်လေးငုံ
Osamu Kunii San Donates Antique Statue of Buddha to Burmese Monks in Japan (Aye Nandar Aung) Photo News
မြန်မာသံဃာတော်များထံ ဂျပန်လူမျိုးတဦးက ရှေးဟောင်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တဆူ လှူဒါန်းခြင်း
Burma Independent Day Event in Seoul, Korea (Zaw Moe Aung) Photo News
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့က မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့
Karen New Year Festival in South Korea (Zaw Moe Aung) Photo News
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့က ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်
New Year Celebration in Toronto, Canada (Photo News)
တိုရန်တို မဟာဓမ္မိကကျောင်း နှစ်သစ် ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲ
New Year Day in Rangoon (Demo Waiyan) Photo Album
၂၀၁၁ နှစ်သစ်ကူးနေ့ ရန်ကုန်မြို့မြင်ကွင်း
Shwe Ze Gwat's Birthday Celebration in Rangoon (Kyaw Thu) Photo Album
New Year Occasion in Utica (Photo News)
ယူတီကာမြို့က နှစ်သစ်ကူး ဆုတောင်းပွဲ
NLD Funfair 2011 (Demo Waiyan) Photo News
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွတ်လပ်ရေးနေ့အကြို ဈေးရောင်းပွဲ
New Year Event in Milwaukee, Wisconsin (Photo News)
မယ်လ်ဝါကီးမြို့ ပညာရာမကျောင်းတိုက် နှစ်ကူးတရားပွဲနဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်း အခမ်းအနား
Photo News from Bowling Green (Photo News)
ဘိုးလင်းဂရင်း ဗုဒ္ဓေါဝါဒကျောင်း လှုပ်ရှားမှု
When the Wind Blows the Snow (New York, December 27, 2010)
မြေပြင်ပေါ်က နှင်းပွင့်တွေကို လေတိုက်လိုက်တဲ့အခါ
The Ugly Side of Winter (CNN iReport)
Free Funeral Services Society Yangon (F.F.S.S) Activities (Kyaw Thu)
၂၀၁၁ အကြို နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ရဲ့ သတင်း
Remote Controlled Airplane Assembling Factories in Meikhtila (Demo Waiyan)
မိတ္ထီလာက လေယာဉ်တပ်ဆင်စက်ရုံအကြောင်း (ဒီမိုဝေယံ)
Snow Storm hits NYC on December 26, 2010 (Myint Hlaing) Photo News
နယူးယောက်ကို နှင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်စဉ်က (ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၀)
Christmas Eve Prayer Service in Rangoon (Demo Waiyan) Photo Album
ရန်ကုန်မြို့က ခရစ်စမတ်အကြိုည ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲ
Snowy Scenes from Rockefeller Center, New York (December 26, 2010)) (Myint Hlaing) Photo Album
နှင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်နေစဉ် မြင်တွေ့ရတဲ့ နယူးယောက် ရော့ကဖဲလားစန်တာ ၀န်းကျင်
After the Blizzard in NYC on December 27, 2010 (Myint Hlaing) Photo Album
နယူးယောက်ကို နှင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီး နောက်တနေ့
Burmese Community News from Malaysia and United States (News Report)
အမေရိကားနဲ့ မလေးရှားက မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်း သတင်း
New Yorkers Looking for their Way out (Myint Hlaing) Photo Album
နှင်းမုန်တိုင်းကျပြီး နှစ်ရက်ကြာတဲ့အထိ နယူးယောက်သားတွေ အပြင်ထွက်ဖို့ ခက်ခဲ နေ
Burma Today Articles
ဒီမိုဝေယံဆီ ရောက်ရှိလာတဲ့ ခေတ်သစ် ဆီသည်ယောက်ျား ဆောင်းပါး
မော်ဒန်ဘုန်းကြီးနဲ့ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေး (မောင်မြတ်နိုင်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော်ကြီး (ခင်မောင်လေး)
Burma Today Poems
ကံမကုန်ရင် ပြန် ဆုံချင်တယ် (ရဲရင့်သက်ဇွဲ)
အမှောင်ကို ခွင်း အလင်းမြှား (မင်းတာရာ)
တကယ် ပျော်စရာ ကောင်းရဲ့လား နှစ်သစ် (ရဲရင့်သက်ဇွဲ)
မင်းအတွက် နှစ်သစ်ကဗျာ (သူ့လူ (ကာရိုလိုင်းနား))
Attachment(s) from Burma Today
ဇန်န၀ါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က Sedona Hotel မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့...
Anti-Conscription Manifesto ( စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ ...
နေ၀င်းမောင်အမေးအမေစုအဖြေ(နအဖရဲ့ သဘောထားအချို့ တွေ...
အင်းစိန်ထောင်တွင် ကွယ်လွန်သူ ဦးတင်မောင်ဝင်း ၂၁ နှ...
DKBA ထံ ရောက်ရှိလာတဲ့ နအဖ ကလေးစစ်သား (၂) ဦး(အပိုင...
Sanction ကိစ္စလေ့လာရန် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ ရ...